China Energy chinwiwa yekuzadza muchina fekitori nevatengesi Higee
Yedu simba chinwiwa yekuzadza muchina mutsetse unobatanidza kuchenesa bhodhoro, kuzadza uye capping muchina mune imwe monoblock muchina. Aya maitiro matatu anoitwa zvizere otomatiki. Kuzadza muPET bhodhoro kana bhodhoro regirazi kana kunwa bhodhoro zvese zvinogona kugadzirwa.
Energy Inwa Kuzadza Mashini 3 mu1 Monobloc Production Line
2.Energy chinwiwa yekuzadza muchina (Kushambidza / kuzadza / kutora 3-in-1 mono-block)
Bhodhoro rinopinda muchikamu chekugezesa chevatatu-mu-mumwe muchina kuburikidza nemhepo inotakura. Iyo gripper yakaiswa pane iyo rotary diski inobata bhodhoro uye inoichinjisa pamusoro pe 180 madigiri uye inoita iro bhodhoro rinotarisana kumeso. Munzvimbo yakakosheswa yekugezesa, kamwene kanobvarura mvura yekushambidza bhodhoro remukati. Mushure mekuchenesa uye nekudonhedza, bhodhoro rinotendeuka pamusoro pemadhigirii zana nemakumi mapfumbamwe achitevedza njanji yekutungamira uye kuita iro bhodhoro rinotarisana nedenga. Ipapo bhodhoro rakashambidzwa rinoendeswa kuchikamu chekuzadza kuburikidza nekutora bhodhoro starwheel. Bhodhoro rinopinda mukati mekuzadza rakabatwa nemutsipa wakabata ndiro. Iyo yekuzadza vharuvhu inoitwa nekam inogona kuona kumusoro uye pasi. Iyo inotora kumanikidza kuzadza nzira. Iyo vharuvhu yekuzadza inovhura uye inotanga kuzadza painofamba pasi ndokubata bhodhoro, vharafu yekuzadza inokwira kumusoro ndokusiya bhodhoro painopedza kuzadza, iro bhodhoro rakazara rinoendeswa kuchikamu chekutora kuburikidza nekubata mutsipa shanduko ichirovera vhiri. Iyo yekumira yekumisikidza banga inobata bhodhoro, inochengeta bhodhoro rakamira risinga tenderere. Iyo screw capping musoro inoramba iri mukuchinja uye kuzvishambadzira. Inogona kupedzisa yakazara capping kosi inosanganisira kubata, kudzvanya, kumisikidza, kuburitsa kuburikidza nekuita kwekam. Bhodhoro rizere rinoendeswa kubhodhoro nzira yekutakura kuenda kunotevera maitiro kuburikidza ne starwheel. Muchina wese wakavharirwa nemahwindo, kukwirira kweiyo yakavharwa hwindo kwakakwirira kupfuura kukwirira kweiyo 3 mu1 muchina, pasi pehwindo rakakomberedzwa rine kudzoka kwemhepo
● Kunze kwechimiro chepasi, zvikamu zvekutapurirana uye zvimwe zvikamu zvinofanirwa kunge zvakagadzirwa nezvinhu zvakakosha. Zvimwe zvipenga zvikamu zvakagadzirwa nesimbi isina tsvina 304.
● Rori rinotakura rakagadzirwa nesimbi isina tsvina, rin'i yekuisa chisimbiso inogadzirwa ne EPDM zvinhu, uye mapurasitiki akagadzirwa neUMPE.
● Iyo gripper inogadzirwa nesimbi isina chinhu, iyo nzvimbo inobata bhodhoro rakagadzirwawo nesimbi isina chinhu, ichienzaniswa neyechinyakare yerabha gripper, ihwo hutsanana hwakawanda, hunogara kwenguva refu, uye hapana inokurumidza-kupfeka zvikamu, zvikamu zveganda remabhodhoro dzivisa kusvibiswa neabha gripper.
● Iyo gripper yakashongedzerwa neyepamusoro-inoshanda yekumwafa kamwene, inogona kukura kune chero chinzvimbo che inwall yebhodhoro, uye inogona kuchengetedza rinsing mvura. Pane chifukidziro pamusoro pemvura yekumwaya inogona kudzivirira kupera mvura. uye kune marongedzero ekudzokorodza slot uye nekudzokorora mapaipi pasi pemabhuru.
● Nguva yekushambidza inogona kuvimbiswa kwemasekondi maviri.
● Nokugadzirisa kukwirira kwezvikamu zvinotenderera kuti zvienderane nekukwirira kwakasiyana kwebhodhoro
● Iyo yekukurudzira inotorwa kubva kune inotyairwa system mune fomati yakapfuudzwa negiya.
● Kugovera kwekushambidza mvura kunodzorwa nevhu remagetsi.
● Yakagamuchirwa inozivikanwa brand anti-corrosion isiri-kuchengetedza inobereka iyo inogona kudzora kusvibiswa kwekuzadza kune zvakatipoteredza.
● Iyo yakatenderera ndiro yakaumbwa nesimbi isina chinhu 304, hombe yakatetepa ine meno ane kubereka.
● Iyo yekumanikidza yemagetsi vharafu inosvitswa yemhando yepamusoro dhizaini nekukurumidza yekuzadza kumhanya, isina hutsanana kona kona, mashoma ekuisa chisimbiso zvikamu, uye chaiwo mvura level chiyero. Iyo vharuvhu yose inogadzirwa neshangu yekudya simbi isina simbi.
● Iyo vharafu yekuzadza inovhura uye yotanga kuzadza painofamba ichigunzva ganda remabhodhoro, vharuvhu yekuzadza inokwira kumusoro ndokusiya bhodhoro painopedza kuzadza.
● Chinwiwa chinotora otomatiki pneumatic vharafu yemagetsi-nhanho switch yekudzora tangi remvura otomatiki.
● Sliding bearing inobvumidzwa isiri-kuchengetedza inobereka, iyo inogona kudzora kusvibiswa kwekuzadza nharaunda. Rolling inobereka yakagadzirwa nesimbi isina chinhu, iyo yekuisa chisimbiso inogadzirwa ne EPDM zvinhu, mapurasitiki akagadzirwa neUMPE.
● Kurudziro yeiyo yekuzadza inotorwa kubva kune inotyairwa system mune fomati uye inopfuudzwa negiya.
● Iyo huru dhiraivha inotora giya dhiraivha, ine hunyanzvi hwekuita, yakaderera ruzha, hupenyu hwakareba, nyore kugadzirisa, girisi yakaringana, girizi inogona kuzodza centralizing otomatiki, inotora transducer kumhanya kwemainjini mota kudzora, muchina unotora nhanho-shoma frequency kutendeuka nguva . Izvo zvinhu zveplatform yese uye furemu ndeye kabhoni simbi ine simbi isina tsvina kunze.
● Muchina unongodzorwa nePLC, kukanganisa pamutsetse kuratidzwa, sebhokisi rebhodhoro, kushomeka kwekepu nezvimwe.
● Izvo zvikamu zvakakosha uye zvemagetsi zvemuchina zviri kutora zvigadzirwa zvekupinza.
Chidimbu ichi chidanho chepamusoro chekururamisa kwemuchina we3-in-1, zvakakosha kuti muchina umhanye zvakanaka uye nehunhu hwechigadzirwa.
● Kukora musoro wekucheka (izvo zvikamu zvikuru zvinogona kuvimbisa iyo capping mhando), iyo nyanzvi inovandudza dhizaini yemagineti simbi, iko kuvandudzwa kunogona kudzora yakaremara mwero wekutora zvirinani uye yechinyakare hunhu zviri nyore kumisikidza uye kugadzirisa iyo torque yekukora capping musoro.
● Iyo yekumusoro yekukochekera musoro ndeye mbiri-chinangwa dhizaini: inokodzera yakapfava cap uye mutambo cap.
● Chigadzirwa icho chinogona kutora iyo yekumusoro cap uye kudzivirira iyo reverse cap kupfuura inogadziriswa mune-cap-inodonha gwara.
● Boka remashini emagetsi anogadzikiswa pagwara rinodonha. Muchina unomira kana pasina kapu pagwara.
● Bhodhoro rinopinda mukati rinoona switch rinogadzikwa pane inokanganisa capper.
● Kune aseptic nozzles pakati pekuchinja kubaya vhiri uye kuzadza zvikamu zvekusukurudza chigadzirwa chakazorora mumabhodhoro eganda.
● Pane chivharo chekapu-yakakiya mumubatanidzwa pakati pekaputi-inodonha gwara uye kubaya chivharo chekapu. Iko kuziva kuti hapana kudyisa hapana cap.
● Nokugadzirisa kukwirira kwezvikamu zvinotenderera kuti zvienderane nekukwirira kwakasiyana kwebhodhoro.
● Kurudziro yeiyo screwing capper inotorwa kubva kune inotyairwa system mune fomati uye inopfuudzwa negiya.
● Zvikamu zvikuru zve screwing capper zvinogadziriswa nedhijitari-chengetedzo yekugadzirisa nzvimbo
Cap loader inoburitsa makapeti kune kapu isingakwikwidzi muchina.
Iyo ine mashandiro eisina bhodhoro isina chivharo kurodha, otomatiki kutonga.
Iko kune detector switch mune iyo cap sorter, kana iyo cap isingakwani, iyo detector pane iyo cap sorter inowana chiratidzo chekushayikwa-chivharo, iyo chivharo eifiti inotanga. Iwo makapeti ari mutangi anopfuura nepakati pebhanhire rekuendesa kune iyo cap sorter. Iyo inogona kuchinja saizi yetangi inlet neiyo flashboard; izvi zvinogona kugadzirisa kumhanya kwekeputi kudonha.
4. Bhandi rinotakura
Pashure: Isina-kabhoni kabhedhi Chinwiwa Chizadza Machine Line
Zvadaro: PET Bhodhoro Juice Kupisa Kuzadza Muchina
Carbonated chinyoro chinwiwa chekuzadza muchina mutsara
Isina-kabhoni kabhedhi Chinwiwa Chizadza Machine Line